Esi nweta ndepụta nke. edu saịtị maka backlinks?
Nweta njikọ site na weebụsaịtị ndị dị elu bụ otu ihe ahụ dị ka ịbịta ha. ụlọ akwụkwọ dị ka ụlọ ọrụ ọchụchọ na-adọta saịtị ndị a dị ka ndị a ma ama, ndị bara uru maka ndị ọrụ na ikike dị elu. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ na-esi ike ịmepụta ndepụta nke - agricultural machinery values used. saịtị edu maka backlinks ma ọ bụrụ na ị bụ obere ma ọ bụ na-adịbeghị anya ngalaba. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-emepe azụmahịa gị n'ịntanetị, ọ bụghị na ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmentị, ọ ga-abụ nsogbu ịnye. ndị na-agụ saịtị na ọdịnaya nwere ike ịmasị ha.
Mgbe ị na-ewu njikọ, ịkwesịrị ịdebe uche gị na ngalaba ikike na ngalaba ọnụahịa. Ihe abụọ a na-ahụ maka nlezianya na ebe nrụọrụ weebụ dị otú ahụ ma na-enye aka ikpebi otu njikọ dị mkpa ga-esi na saịtị. Site na itinye njikọ gị na ikike dị elu. edu, weebụsaịtị na-enye gị ọtụtụ uru. Nke mbụ, ịnwere ike ịkọwa ọdịnaya gị n'ụzọ dị mfe. edu weebụ, ma o yikarịrị ka ọ ga-enwe ọkwa dị elu n'ime obere oge. Ọzọkwa, ị ga-enweta ihe ọṅụṅụ bara uru bara uru site na njikọ ndị a dị na ya.
Akụkụ a na-etinye aka na usoro njikọ njikọ ndị na-arụ ọrụ iji mepụta ndepụta nke. ụlọ akwụkwọ maka backlinks. M ga-akụziri gị otu esi agafe n'ogo ma nweta ikike nke onwe gị.
Nweta ihe ndeputa site na PR di elu. edu weebụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta njikọ ndị ọzọ dị mkpa, ị ga-achọ ịmepee ebe nrụọrụ weebụ gị nke mbụ (dezie mmezigharị koodu, guzobe usoro nkwụsịtụ dị mma, mepee metadata ma mepụta ọdịnaya bara uru).
Ihe kachasị mma ma dị mma maka njikọ ụlọ njikọ njikọ weebụsaịtị gụnyere Wikipedia,. gov na. edu ngalaba. Ebe ndị a na-ebu ụdị ibu dị iche na Google. Ndị a na ebe nrụọrụ weebụ na-ebu ọtụtụ uru maka ndị ọrụ na ihe ọ bụla backlink nke edebere na ibe ha nwekwara ike ịtụkwasị obi.
Ka anyị tụleekwu nkọwa zuru ezu maka ụzọ isi nweta. edu na. gov backlink:
Dịka iwu. edu na. gov weebụsaịtị nwere blọọgụ ebe post dịgasị iche iche na nyocha na-agụ akwụkwọ. Ị nwere ike ileghara njikọ a njikọ ohere. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbaso usoro ụlọ ọrụ njikọ gị ma malite na njedebe n'uche, ụfọdụ n'ime ọdịnaya ịchọrọ ịkwado n'elu nwere ike ịnweworị. gov ma ọ bụ. ụlọ akwụkwọ na-ezo aka na ya. N'iji usoro njikọ ụlọ ọrụ a, ị ga-enwe ike nweta ihe ndị na-emetụta ihe na-emenụ n'ime ọdịnaya gị.
Nye scholarships na niche gị
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịnye scholarships maka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị iche iche, karịsịa maka ndị ahụ, ma ọ dịkarịa ala n'ụzọ ụfọdụ, gbasaa ọrụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na - ere ọgwụ, ị nwere ike ịkwado na mahadum ahụike inye ụmụ akwụkwọ ha ego, inye ego ma ọ bụ scholarships. Ọ ga - enyere gị aka ịlaghachi na niche gị ma nweta ihe njikọ njikọ dị mkpa site na PR dị elu. edu weebụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịkụziri ụmụ akwụkwọ ọrụ gị, na ị nwere ike iji ya mee ihe dị ka ọdịnaya. Ma ọ bụrụ na ịchọta ezi onye edemede, ị nwere ike ịchụ ya ụgwọ dị ka onye edemede ọdịnaya maka ụlọ ọrụ gị na-agbaso.